FIFA The Best ဆုရဖို့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ မိုဒရစ်
FIFA The Best ဆုရဖို့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပိုမိုရေပန်းစားနေတဲ့ မိုဒရစ် Modric
28 Jul 2018 . 12:47 PM
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ခရိုအေးရှားဝါရင့်ကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ် Modric ဟာ FIFA The Best ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ပရိသတ်အများစုက ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ မိုဒရစ်ဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့အတူ ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သလို၊ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်း ခရိုအေးရှားအသင်းကို သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ။ စပိန်နာမည်ကျော် အားကစားသတင်းစာ AS က FIFA The Best ဆုကို ဘယ်သူရသင့်လဲဆိုတာကို အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေဆီက မဲဆန္ဒကောက်ခံခဲ့ပြီး ပရိသတ်အများစုက မိုဒရစ်ကို မဲပေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုဒရစ်ဟာ မဲအရေအတွက် (၁၄၂၂၇)မဲရရှိခဲ့ပြီး အဲဒီဆုအတွက် ရေပန်းစားနေတဲ့ တခြားနာမည်ကျော် ကစားသမားတွေထက် မဲအပြတ်အသတ်အသာရခဲ့တယ်။ ဒုတိယမဲအများဆုံးက လက်ရှိဂျူဗင်တပ်စ်အသင်း ကစားသမားသစ် စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဖြစ်ပြီး (၅၃၅၀)မဲ ရရှိခဲ့သလို၊ သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက် မက်ဆီ Messi က (၄၃၈၄)မဲနဲ့ တတိယအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ ပြင်သစ်အသင်းတိုက်စစ်မှူး ဂရစ်ဇ်မန်း Griezmann ကတော့ (၃၈၉၄)မဲနဲ့ စတုတ္ထအများဆုံးသာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ FIFA The Best ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို လာမယ့် စက်တင်ဘာ(၂၄)ရက်ကျရင် လန်ဒန်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီဆုကို ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း မိုဒရစ်ပဲ ရယူနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်ခုန်သွားရမှာပါ . . .
FIFA The Best ဆုရဖို့ ပရိသတျတှကွေားမှာ ပိုမိုရပေနျးစားနတေဲ့ မိုဒရဈ Modric
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ခရိုအေးရှားဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ မိုဒရဈ Modric ဟာ FIFA The Best ဆု ဆှတျခူးနိုငျလိမျ့မယျဆိုပွီး ပရိသတျအမြားစုက ထငျကွေးပေးနကွေပါတယျ။ မိုဒရဈဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီမှာ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့အတူ ခွစှေမျးပွကစားခဲ့သလို၊ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာလညျး ခရိုအေးရှားအသငျးကို သမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲရောကျအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့သူပါ။ စပိနျနာမညျကြျော အားကစားသတငျးစာ AS က FIFA The Best ဆုကို ဘယျသူရသငျ့လဲဆိုတာကို အှနျလိုငျးကနတေဈဆငျ့ ပရိသတျတှဆေီက မဲဆန်ဒကောကျခံခဲ့ပွီး ပရိသတျအမြားစုက မိုဒရဈကို မဲပေးခဲ့ကွတာလညျးဖွဈပါတယျ။
မိုဒရဈဟာ မဲအရအေတှကျ (၁၄၂၂၇)မဲရရှိခဲ့ပွီး အဲဒီဆုအတှကျ ရပေနျးစားနတေဲ့ တခွားနာမညျကြျော ကစားသမားတှထေကျ မဲအပွတျအသတျအသာရခဲ့တယျ။ ဒုတိယမဲအမြားဆုံးက လကျရှိဂြူဗငျတပျဈအသငျး ကစားသမားသဈ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဖွဈပွီး (၅၃၅၀)မဲ ရရှိခဲ့သလို၊ သူ့ရဲ့ ပွိုငျဘကျ မကျဆီ Messi က (၄၃၈၄)မဲနဲ့ တတိယအမြားဆုံးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံ ပွငျသဈအသငျးတိုကျစဈမှူး ဂရဈဇျမနျး Griezmann ကတော့ (၃၈၉၄)မဲနဲ့ စတုတ်ထအမြားဆုံးသာ ဖွဈခဲ့ရတယျ။ FIFA The Best ဆုပေးပှဲအခမျးအနားကို လာမယျ့ စကျတငျဘာ(၂၄)ရကျကရြငျ လနျဒနျမွို့မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈတာကွောငျ့ ဒီဆုကို ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ထားတဲ့အတိုငျး မိုဒရဈပဲ ရယူနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရငျခုနျသှားရမှာပါ . . .